January 2022 – Cele News TV
(၁)ရက်နေ့မှာ ဆိုင်ဖွင့်မှာလားပိတ်မှာလားလို့မေးလာလူတွေအပေါ် ပညာသားပါပါ လေး ပြန်ဖြေ လိုက်တဲ့ မယ်လို ဒီခေါင်
January 31, 2022 100million 0
The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ လာရောက်သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ မယ်လိုဒီခေါင်ကတော့ Winner ဆုကြီးနဲ့လွဲချော်ခဲ့ပေမယ့် အခုဆိုရင် အဆို တော်တစ်ယေ ာက်အဖြစ် ပရိသတ်လက်ခံ အားပေးမှုကို ရရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂီတအနုပညာအလုပ်အပြင် ကိုယ်ပိုင်ဖက်ရှင်ဆိုင်နဲ့ ဖိနပ်ဆိုင်တို့ကိုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ မယ်လိုဒီခေါင်ဟာ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှာ ဆိုင်ဖွင့်မှာလား […]
ဖောက်ထွင်းခံရတာမှမကြာသေးပဲ ခြံတစ်ခြံဝယ်နိုင်သွားပြီဆိုပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေကိုသေချာရှင်းပြလိုက်ရတဲ့ ဖူးပွင့်ခိုင်
သရုပ်ဆောင်ဖူးပွင့်သခင်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းက သူမရဲ့ နေအိမ်ကို ယုံကြည်လို့အပ်ထားရာမှ ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေက ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ဖူးပွင့်သခင်ကလည်း သူမရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို တော်တော်များများ ပြန်မရပဲ ဆုံးရှုံးခဲ့ ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့မှာတော့ ဖူးပွင့်သခင်က အိမ်ဖောက်ထွင်းခံရ တာတောင်မကြာသေးပဲ ခြံတစ်ခြံဝယ်နိုင်သွားပြီဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်ကြသူတွေကို Live လွှင့်ပြီး ရှင်းပြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ […]
ကိုယ်ပိုင် Brand လေးထုတ်ပြီး စီးပွားရေးလောကထဲခြေစုံချချိန် ခင်ပွန်းသည်ကိုရှိစေချင်ကြောင်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ပြောပြလာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်
ဆရာဝန်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သလို အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းဟာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သာယာအေးချမ်းတဲ့မိသားစုဘဝလေး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီး အခုဆိုရင် သားနဲ့သမီးအတွက် အဖေလိုရော အမေလိုပါ ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်လေးနဲ့ အင်္ကျီတွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက သူမအခုလိုအလုပ်တွေကြိုးစားနေချိန် ခင်ပွန်းသည်ကို […]
ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိတ်သတ်တွေကို ဝေမျှဝေလာခဲ့တဲ့ မုဏ်း
Happy Beach” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ပရိသတ်တွေ ရင်ထဲကို “ပုလဲ” ဆိုတဲ့ Character လေးနဲ့ ရောက်ရှိခဲ့တဲ့သူကတော့ သရုပ်ဆောင် “မုဏ်း” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မုဏ်းက MRTV –4ဇာတ်လမ်းတွဲ တော်တော်များမှာလည်း ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ထိကို အောင်မြင်နေသူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင်ဖန်တီးသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ […]
တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး အမွတ္တရ အေနနဲ႔ ႐ိုးရာ ဝတ္စုံေလးကို ဝတ္ၿပီး အရမ္းကို လွရက္လြန္းေနတဲ့ ပုံေလးေတြကို မွ်ေဝလာတဲ့ စိုးျပည့္သဇင္…
တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး အမွတ္တရ အေနနဲ႔ ႐ိုးရာ ဝတ္စုံေလးကို ဝတ္ၿပီး အရမ္းကို လွရက္လြန္းေနတဲ့ ပုံေလးေတြကို မွ်ေဝလာတဲ့ စိုးျပည့္သဇင္… The post တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး အမွတ္တရ အေနနဲ႔ ႐ိုးရာ ဝတ္စုံေလးကို ဝတ္ၿပီး အရမ္းကို လွရက္လြန္းေနတဲ့ ပုံေလးေတြကို မွ်ေဝလာတဲ့ […]
မၾကာခင္မွာ ျပသေတာ့မယ့္ မေၾကးစည္ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမွာ ပရိတ္သတ္ေတြမျမင္ဖူးေသးတဲ့ ဇတ္႐ုပ္နဲ႔ ျမင္ေတြ႕ရေတ့မယ့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ နကၡတ္
မၾကာခင္မွာ ျပသေတာ့မယ့္ မေၾကးစည္ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမွာ ပရိတ္သတ္ေတြမျမင္ဖူးေသးတဲ့ ဇတ္႐ုပ္နဲ႔ ျမင္ေတြ႕ရေတ့မယ့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ နကၡတ္ The post မၾကာခင္မွာ ျပသေတာ့မယ့္ မေၾကးစည္ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမွာ ပရိတ္သတ္ေတြမျမင္ဖူးေသးတဲ့ ဇတ္႐ုပ္နဲ႔ ျမင္ေတြ႕ရေတ့မယ့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ နကၡတ္ appeared first on Celebrity Corner. […]
ချစ်ရတဲ့ဖေဖေနဲ့အတူ ဆော့ကစားကာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ထရက်ရှာလေးရဲ့ ချစ်စရာ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာ ရရှိထားတဲ့ အဆိုတော် စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ ကြည်နူးအားကျစရာ မိသားစုဘဝလေးကို လက်ရှိမှာ ပိုင်ဆိုင်ထားသလို သူ့မရဲ့ ချစ်စရာ သမီးလေး ထရက်ရှာလေးကလည်း အရွယ်ရောက်လို့ လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထရက်ရှာလေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အပြည့်အဝရရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင် သားသမီးတွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ မျက်စိရှေ့တင် […]
၁နှစ်လောက် က နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးရတာ ကို ပြော ပြ လာ တဲ့ အဆိုတော် Rဇာနည်
ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အသံ ၊ ချိုမြသာယာတဲ့ အသံနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရင်ထဲထိုးဖောက်နေရာယူထားတဲ့ အမျိုးသားအနုပညာရှင် တေးသံရှင်တစ်ဦးလို့ဆိုလာရင်တော့ အဆိုတော် Rဇာနည်ကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ အဆိုတော် Rဇာနည် ဟာဆိုရင် (၂၀၂၁)ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁)ရက်နေ့ အာဏာထိန်းချုပ်မှုကို ပြည်သူနှင့်တ သားတည်း တော်လှန်လှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်မှာ အဝေးတစ်နေရာသို့ တိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော် […]
အပူပင္မရွိခဲ့စဥ္ခ်ိန္က ေပါ့ပါးလြတ္လပ္စြာနဲ႔ ႐ိုက္ကူးထားခဲ့တဲ့ ပုံေလးေတြကို မွ်ေဝေဖာ္ျပလာခဲ့တဲ့ ေမ
အပူပင္မရွိခဲ့စဥ္ခ်ိန္က ေပါ့ပါးလြတ္လပ္စြာနဲ႔ ႐ိုက္ကူးထားခဲ့တဲ့ ပုံေလးေတြကို မွ်ေဝေဖာ္ျပလာခဲ့တဲ့ ေမ The post အပူပင္မရွိခဲ့စဥ္ခ်ိန္က ေပါ့ပါးလြတ္လပ္စြာနဲ႔ ႐ိုက္ကူးထားခဲ့တဲ့ ပုံေလးေတြကို မွ်ေဝေဖာ္ျပလာခဲ့တဲ့ ေမ appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
ပရိသတ်ကြီးရေ မေမီကိုကိုကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေး ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ MRTV –4ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပြည့်ဝလှတဲ့သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည် ကြောင့် ပရိသတ်တွေက မေမီကိုကို ကို အားပေးချစ်ခင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ မေမီကိုကိုက သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းလေးတစ်ခုကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေ ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ […]
စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲကြုံတွေ့နေတဲ့ သူတွေအတွက် မင်း သား ချော နေတိုးရဲ့ အလှူ